musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vanotamba Nhabvu Vanotamba Roberto Pereyra Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius nezita rezita rokuti "El Tucumano". Our Roberto Pereyra Childhood Indaba ne Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvekutanga kwake kwakanaka kune 2018 / 2019 Premier League gore. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanoziva zvakawanda pamusoro peBootto Pereyra's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Roberto Pereyra Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga uye Hwemhuri
Kutanga, zita rake rose ndiRoberto Maximiliano Pereyra. Roberto Pereyra akaberekwa musi we 7th January 1991 kuna mai vake Rosa Toledo uye baba Leonides Pereyra muSan Miguel de Tucuman.
Kuroorana pakati pevabereki vake; Leonides Pereyra naRosa Toledo ndeyeyemwemwe kunyemwerera uye mufaro.
Vabereki vaRoberto Pereyra ndivo vaKristu vanobva muRoma Katurike. Pamberi pePereyra apinda muchibvumirano, baba vake vakashanda mune firiti yemuchero yemarimu. Kare kumashure, Leónides aifanira kushanda zvakaoma kuti ape mhuri yake zvaizodya nemari yezuva nezuva yaakawana.
Pereyra, kusiyana nevatambi vakawanda kubva mumhuri yakapfuma (Gerard Piqué, Andrea Pirlo, Hugo Lloris Mario Götze etc) akave nenguva yakaoma munguva yehupenyu hwake hwepakutanga. Akakurira mumakumbo eTucuman nehanzvadzi dzake mbiri nehanzvadzi.
Kare kumashure, nzvimbo yake yaigara ichizivikanwa nokuda kwezvakawanda zvakasikwa sezvo yakanga iri munzvimbo yekuchamhembe-kumadokero kweArgentina. Pereyra nevabereki vake vaimbogara muimba yehuni iyo yakanga isingakwanisi kutora kusvikira vasimuka kune imwe imba yakavakwa nekrete. Izvi zvakaratidza sekuvandudza kusvikira zvave pachena kuti hombe yavo itsva inofanana nekukura kwechikwata chebhokisi. Kuona dambudziko rakaita kuti Pereyra awane zvokudya zvekuda kwake nekutsvaga mukutengesa nekuita mamwe mabasa asinganzwisisiki. Maererano naye;
"Hatina chinhu. Ndakanga ndichitengesa ndende dzemhangura uye dzimwe nguva michero kuitira kuti ndigone kutenga sandwich. Ndakanga ndiriwo murimi weminda, ndichichera uswa. Hatina kushaya nzara kufa asi baba vaigona kungoita zvishoma zvaidiwa, saka ndaifanira kutengesa zvinhu zvishoma zvishoma. "
Roberto Pereyra Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Career Buildup
Kunyange zvazvo aiva nekutanga kunotanga, izvi hazvina kumudzivisa kubva pakuenderera mberi pane zvaanoshuva anodiwa mumwoyo make, izvi ndizvo nhabvu. Apo Pereyra akatanga kutamba nebhola, haana kumbove ane dumba. Kunyangwe paakazoita bhoti, iye achiri kuramba achishandisa shangu dzake dzisina shangu kuti atambe, kuchengeta zvipfeko kumakwikwi ehutano.
Nekutambudzika kwose, Pereyra akatanga kutamba kune rimwe rutivi rwevechidiki rwakamhanya neUTA Argentine Road Transport Union. Pa15, akaitamba paNecochea, yaiva kumaodzanyemba kweBuenos Aires. Kutenda kushingaira kwakagadzirwa kwakachengetwa mukati make, River Plate scouts inofarira kufarira kwaari. Yaiva pahombekiti Pereyra yakawana basa rake rechokwadi semuridziri uye mutambi wemhando dzakasiyana-siyana.
Sezvo achiziva kuti akabva kumunhu akazvininipisa kwazvo, Pereyra akaedza kurongedza paari pachake kuitira kuti atengese kunyika yose. Yaiva paRwiziplate basa rake revechidiki rakapera uye akatanga kutora pfungwa huru pachikwata chechikwata chakamupa tikiti yake kuEurope. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Roberto Pereyra Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Ukama Hupenyu
Pasi pemunhu wese mukuru, pane mukadzi. Nenguva ino, kune vose vanobudirira mutungamiri wenhese Footballer, pane ngoro inofadza sezvinoonekwa mumunhu akanaka waMaria Carolina, akafananidzirwa pasi ne rudo rwehupenyu hwake.
Pereya iye zvino akaroorwa naMaria uye vose vane mwanakomana anonzi Maxi Jr Pereyra uyo akaberekwa musi waOctober 2015.
Kutonga kubva panguva iyo mwanakomana waRoberto Pereyra akaberekwa, vose vanodiwa vanofanira kunge vakaungana panguva yake paRwizi Plate, nguva yaakanga asina kuita yakawanda.
Roberto Pereyra Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Baba Mwanakomana Bonding
Munhu wose anogona kuva baba, asi zvinotora murume chaiye saRoberto kuti aite basa remukadzi kumwanakomana wake.
Nokuda kwaRoberto, zvaro hazvisi kungofunga zvido asi kusimbisa ushamwari pakati pake nemwanakomana wake. Unhu hwakadaro hwebaba vakuru hunoonekwa pasi apa.
Sezvakaitika panguva yekunyora, Maxi Jr Pereyra anotototevera mumakwara ababa. Vose vari kuda kupedza nguva (mumba nekunze) vachitamba bhora.
Roberto Pereyra Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Upenyu hweMhuri
Vabereki vake vakanga vari kufemerwa shure kwavo vane rudo rusingaverengeki kumhuri yake. Kutonga kubva pamufananidzo uri pasi apa, Roberto Pereyra anonyatsonzwisisa pfungwa yekugamuchira "Vabereki Vanobhadhara"Philosophy.
Roberto Pereyra akabhadhara vabereki vake nokuda kwezvinhu zvose Rudo, Kutarisira, Kuchenjerera kwaakagamuchira kubva pakuberekwa, kunyanya kukosha kwavo kutsigira mubasa rake rose.
Chinhu chakanakisisa munyika ino ndechekuona baba vake, mum, hama, uye hanzvadzi vose vachifara uye vachiziva kuti ndicho chikonzero chekufara ikoko. Imwe chunk yemutero wayo inoenda kumhuri yake.
Roberto Pereyra Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Zvimwe Zvako
Pamusoro pezvinyorwa zvake, Pereyra inotarisirwa, inorangwa uye ine kuzvidzora. Anoda mhuri yake uye tsika yake yeArgentine.
Pereyra ane chimiro chemukati chekusununguka chinomubatsira kuti afambise mberi zvikuru muupenyu hwake hwega uye hwehutano.
Shamwari kune mazinga ose evaFans: Pereyra yakave ichizivikanwa kuva neshamwari kwazvo kune vateveri vake, kunyange avo vane hurema. Muenzaniso unoratidzwa pasi apa.
Nezita Rake Rokudana: Roberto Pereyra akawana zita rake reNickname "El Tucumano"Munguva yake paRwizi Plate. Inoreva zita kune mumwe munhu anobva munzvimbo yeTucumano. Tucumán idunhu duku riri kumadokero kumadokero kweArgentina. Nemhaka ye rudo Roberto anekurera kwake uye vanhu vake kubva kuTucuman, akasarudza kupfuurira nekutakura zita racho. Izvi zvakamuita kuti agadzire zvipfeko zvake kunyanya mabhoti ake kuti ave neshoko rokuti TUCU.
Nekutenda Kwake: Sezvambotaurwa pakutanga muupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yeRoberto Pereyra ndeyekutenda kweKaturike yechiKristu. Anonyatsoteerera tsika yechiKaturike.
Pamusoro peGomo Rake Rakarongwa: Kutanga kwe2018 / 2019 English Premier yakaona chirevo ichi chinangwa chekupemberera kubva kuna Roberto chaakadana "Ndarama para celebrar" zvinoreva kuti my chinangwa chikuru seGolide kuti chifare.
Waizviziva here?... Watford owners, mhuri yePozzo inoziva Roberto Pereyra zvakanaka uye ine ukama hwepedyo naye.
Roberto Pereyra Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Basa Rinotya
Pana 16 December 2016, Pereyra aiva nemabvi akaremara akakuvadza kuruboshwe rwake rwakavhiringidza meniscus-cartilage yake (mapfupa anotyisa). Kukuvadzwa kwakaita kuti agare kunze kwebhokisi kwemwedzi ye8 panguva yaaitya basa rake rapera. Akataura izvi pashure pokunge awanazve;
"Yaiva nguva yakaoma zvikuru mupfungwa,"
"Zvinorwadza sezvaunongoda kudzoka. Vanokuudza mwedzi mitanhatu uye iwe unogona kunzwa mazuva ose emwedzi mitanhatu. Zvinokutadzisa mupfungwa, asi nekuzvitsaurira, simba, simba, uye kutsigirwa kubva kune nhengo dzemhuri neshamwari dzakanaka, unosvika kumagumo emugwagwa. Iwe unokwanisa kutarisana nayo. Ndiri kuonga kune vose vakatsigira ini munguva yakaoma. "
CHOKWADI CHINOGONA: Tinoonga nekuverenga yedu Roberto Pereya Childhood Indaba pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyora iwe kana kutaura nesu!
Gerard Deulofeu Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Abdoulaye Doucoure Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Emre Can Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Claudio Marchiso Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts